Dadka wadanka Tunisia oo maanta xusaya markii uu xukunka dalkaasi iskaga cararay Zine Caabdiin Ben Cali – Radio Daljir
Tunis,Jan 14 -Dadka wadanka Tunisia ayaa maanta oo Sabti ah si weyn u xusaya maalintii uu xukunka dalkaasi iskaga degay hogaamiyihii hore ee dalkaasi Zine Caabidiin Ben Cali ,muddo laga joogo sanad, kaddib asbuucyo banaanbaxyo ah oo isaga ka dhan ahaa.
Madaxweynihii hore ee dalka Tunisia ayaa 14kii January ee sanadkii hore si lama filaan ah uga baxsaday dalkiisa, iyadoo isaga iyo qoyskiisu ay u duuleen magaalada Jidda ee dalka boqortooyadda Saudi Arabia halkaasi oo ay weli ku noolyihiin.
Kacaanka dalka Tunisa oo ahaa horseedaha kacdoomada ee Guga carabta ayaa sababay in doorashooyin dimuquraadi ah ay ka qabsoomaan dalkaasi bishii October.
Hogaamiyayaasha sida Dimuquraadiga ah lagu soo doortay ee dalka Tunisia ayaa maanta oo sabti ah martigelinaya marti-sharaf fara badan oo uu ku jiro madaxweynaha dalka Algeria C/casiis Bootafliiqa oo isagu wasiir ka noqday xukuumaddii ugu horeysay ee dalkaasu yeesho, muddo nus qarni sano laga joogo, islamarkaana imika xukunka dalkaasi giijisanaya.
Xuska riditaankii Zine Cabidin ayaa waxaa sidoo kale ka qaybgelaya Amiirka dalka Qadar Sheikh Xamad Bin Khaliifa Al-saani oo loo arko mid ka mid shaqsiyaadka iyo dhinacyada si weyn u taageeray kacaanka guga ee carabta.
Iyadoo horumar iyo xoriyad laga gaadhay dalka Tunuisa, ayaa weli waxaa jira caqabado badan oo weli taagan, waxana dalkaasi meel sare ka joogta xaddiga shaqa-la?aanta.